Akụkọ - Iji melite arụmọrụ nke ọgbụgba ọgbụgba ọkụ, ị họrọla abrasive kwesịrị ekwesị?
Iji melite arụmọrụ nke ọgbụgba ọkụ ọgbụgba, ị họrọla abrasive kwesịrị ekwesị?
Gbawara ọgbụgba ọkụbụ a nkịtị usoro nke metal n'elu ọgwụgwọ. Ọ na ọtụtụ-eji mgbatị, ígwè, bughi workpiece, metal nhazi akụkụ na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ.With mmelite mma nke sayensị na nkà na ụzụ na ume mmepe nke n'ichepụta, anyị nwere elu na elu chọrọ maka n'elu ọgwụgwọ àgwà, na-eri, na arụmọrụ wdg nke metụtara ikpeazụ elu àgwà na uru nke ngwaahịa, n'ihi ya, ọ dọtara ọzọ na ndị ọzọ anya.
Isi ihe ndị na-emetụta arụmọrụ nke ọgbụgba ọkụ ọgbụgba:
1. Ogo nke abrasive eji gbaa ọgbụgba ọkụ: dị ka ụdị, hà, arụmọrụ index (ekweghị ekwe, ike ọgwụgwụ ndụ) nke abrasive, wdg;
2. Ezi uche nke igba ọgbụgba ọkụ ọgbụgba: oge ​​ọgbụgba ọkụ, ọsọ, ọsọ, wdg;
3. Ezi uche nke ogbugba ọgbụgba ọkụ nke steeti: ogbugba ogbugba, nkewa nkewa, uzuzu iwepụ, wdg.
☛Mmekọrịta dị n'etiti abrasive urughuru size na arụmọrụ:
Ọnụ ọgụgụ nke abrasives nke ihe nhicha na-atụba kwa oge buru ibu ma okpukpu abụọ n'okpuru otu ibu ahụ, arụmọrụ nhicha nwere ike ịbawanye nke ọma.
Nsonaazụ nke ngwakọta abrasive na arụmọrụ:
Ọ bụ ihe na-egbu mgbu maka ndị ọrụ ịzụta abrasives dị ọnụ ala ma dịkwa ala, nke dị narị narị yuan dị ọnụ ala karịa ọnụahịa otu. Otú ọ dị, ihe efu efu nke Mbelata ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ karịrị karịa ego a, a ga-agbakọ ụgwọ ego nke ndụ ọrụ dị ala na-efu.
N'iburu omume a n'uche, anyị enweela ihe ịga nke ọma ịmepụta ụdị abrasives dị elu - obere carbon mix abrasives（Obere carbon steel）- nke nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka mezuo nzube nke mbenata ọnụ na ịbawanye arụmọrụ. Anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ aka ọrụ, jikọtara ya na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ndị ahịa, site na ịhazigharị akụkụ nke ihe abrasive na njikarịcha nke ọgbụgba ọkụ na-arụ ọrụ akụrụngwa, anyị nwere ike melite arụmọrụ nke ọgbụgba ọkụ ọgbụgba, na-enyere ndị ọrụ aka ịghọta dabere management nke shot ọgbụgba ọkụ usoro, na-atụgharị ọghọm n'ime uru, na ihe ịga nke ọma na-enyere iji belata-akwụ ụgwọ ma na-amụba arụmọrụ.
Na mgbakwunye na-enye elu-arụmọrụ ngwaahịa, anyị na-elekwasị anya na nnyocha nke shot ọgbụgba ọkụ technology, jiri a maara nke ọma ọgbụgba ọkụ ọgbụgba ọkụ n'ụlọ na mba ọzọ dị ka ụlọ ọrụ oru nkwado, nwere ọkachamara oru ọrụ otu, na-enye ọtụtụ puku na-na saịtị ọrụ ahịa kwa afọ, na-elekwasị anya na-enye oru nkwado na ọrụ maka ogbugba ọgbụgba ọkụ ngwa, Gbado anya na nnyocha na mma si abrasive mmepụta technology ka ngwaahịa ngwa technology ka na-na saịtị eji technology.
Mgbe engineer on-saịtị nsuso carding, enyemaka na-eduzi ndị ahịa na-na saịtị nkọwapụta;
1. Estmepụta ma melite usoro nchịkwa nke ịgbakwunye na iji abrasives ọgbụgba ọkụ;
2. nụchara anụcha management (digital ịme ngosi uwe nke mix nkezi nke abrasive).
Oru oma abrasive inggwakọta na-agụnye nke ọma nkesa nke nnukwu, ọkara na obere ahụ. Ihe nkesa ahụ na-agbanwe mgbe niile n'ihi nhụsianya abrasive nke na-emetụta ugboro ugboro n'elu ebe a na-arụ ọrụ. Maka abrasives dị mkpụmkpụ, ọ na-esiri ike ijigide nguzozi kwesịrị ekwesị n'ihi nbibi ngwa ngwa ha na iwepụ ha na usoro. Ndị a fluctuations ke size nkesa na-emetụta elu imecha na arụpụtaghị.
Oge ọgbụgba ọgbụgba ahụ na-ebelata site na 90 sekọnd ruo 80 sekọnd, na arụmọrụ na-abawanye karịa 10%;
Ọtụtụ ebe ọgbụgba ọkụ na-agba agba abụghị ọkachamara zuru oke n'iji abrasive eme ihe na ịgbanye ọgbụgba ọkụ, ma ọ bụ saịtị ahụ erubeghị ihe chọrọ nke njikwa ọma, na-ebute arụmọrụ ma ọ bụ uru nke ọgbụgba ọgbụgba abrasive anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Na gburugburu ahịa asọmpi na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-echekwa maka mbelata ego nke njikọ njikọ ọ bụla. Ezie na anyị na-echegbu maka nnukwu ihe na isi njikọ dị ka akụrụngwa, gbazee, ịgbado ọkụ na mkpụrụ, anyị kwesịrị itinyekwu uche na-achịkwa egbe ọgbụgba ọkụ ihicha. Nhọrọ nke arụ ọrụ dị elu na ọkachamara ọkachamara ọgbụgba ọkụ nkwado teknụzụ doro anya bụ isi ihe iji melite arụmọrụ nhicha Thezọ kachasị adaba iji belata ọnụ ahịa, mgbanwe a ga-akwalite ngwa ngwa nkeọgbụgba ọkụ ọgbụgba na mmelite nke njikwa ọnụ ahịa!
E wezụga nke ahụ obere carbon ígwè shot：
TAA nwekwara ngwaahịa ígwè shot,ígwè grit,agba ígwè shot,igwe anaghị agba nchara waya,igwe anaghị agba nchara,carbon nchara ịkpụ waya, abrasive media,aluminom bee waya, zinc bee waya, ọla kọpa ịkpụ waya,garnet na na na.
TAA si ọgbụgba ọkụ igwe & akụkụ ahụ mapụtaranwekwara ike inyere ndị ahịa nweta otu-nkwụsị shopping maka gbawara ngwa!